Milestone - Kooxda Huaihai Holding
La aasaasay 1976 oo leh Xuzhou Liangshankou Vehicle Factory oo ah shirkad hore, Kooxda Huaihai Holding Group waa shirkadda ugu aqoonta badan ee soo saarta baabuurta yar ee goobta
Diiwaangelinta "Huaihai" Brand waxay goob joog u ahayd taariikhda horumarinta ee Warshadaha Gaadhiga Yar ee Shiinaha
Aasaaska kooxda Huaihai Holding, ee Gobolka Jiangsu
Aasaaska xiriirka, Shirkadda Jiangsu Zongshen.Iyada oo maalgashi kala duwan oo ＄ 15.1 milyan oo doolar ah si loo gaadho 100% horumarka qiimaha iyo wax soo saarka labadaba, oo ku saabsan sida mucjisada warshadaha
The Jiangsu Zongshen dhismaha 2aad waxaa taageeray by ＄ 30.3 milyan oo doolar maalgashiga kooxda si loo gaaro 30,0000 sets sanadlaha awoodda wax soo saarka ee mootooyinka iyo in la sameeyo awoodda shirkadda heerka sare ee warshadaha.
Iyada oo mugga iibka ay ku jirto heerka ugu sarreeya ee suuqa gudaha, Shirkadda Jiangsu Zongshen waxay noqotay soo saaraha mootada ugu weyn ee Shiinaha.
Iyada oo ＄ 83.41 milyan oo doolar maalgashiga gacan ka 3rd constrion ee Jiangsu Zongshen , aasaaska dhawaaqa waxaa loo dhisay si loo gaaro million sets awoodda wax soo saarka iyo No.1 shirkadda
U diiwaan gashan sidii Shirkadda Kooxda Heerka Qaran, "Huaihai" waxay noqotay hoggaamiyaha iyo halbeegga warshadaha.
Iyada oo ： 15.1 milyan oo doolar lagu maalgelinayo dhismaha 4-aad ee Jiangsu Zongshen iyo dhismaha teknoolojiyadda oo daboolaya 140000 mitir oo laba jibbaaran, shirkaddu waxay heshay guul kale oo heer sare ah ee warshadahan.
Shirkadda Jiangsu Zongshen Electronic & Makaanikada waxaa lagu aasaasay iskaashiga istiraatijiyadeed ee ka dhexeeya Huaihai Holding Group iyo Zongshen Group iyada oo ah masaafada kale ee muhiimka ah ee horumarinta sare
7.583 milyan oo doolar ayaa la galiyay si loo dhiso Shirkadda Gaadiidka Cusub ee Tamarta Jiangsu Huaihai si ay u dhisto shirkad kale oo hormuud ka ah warshadaha EV.
Shirkadda Tianjin Zongshen waxaa lagu aasaasay 7.583 milyan oo doolar si ay u buuxiso qaabka istaraatiijiyadeed ee muhiimka ah ee suuqa Huaibei, iyada oo samaynaysa saldhigga ugu weyn ee wax soo saarka baabuurta yaryar ee aaggan.
Iyada oo leh iskaashi kale oo istiraatiiji ah oo muhiim ah oo u dhexeeya Huaihai Holding Group iyo Kooxda Zongshen si loo xaqiijiyo qaabka aasaasiga ah ee suuqa gudaha ee koonfur-galbeed si loo aasaaso Shirkadda Gaadiidka Chongqing Zongshen oo ay u helaan jagada ugu horreysa ee warshadaha soo saara gawaarida yaryar ee aaggan.
Kooxda Huaihai Holding Group waxay maalgelisay lacag aad u badan si ay u hesho shirkaddii hore ee Navy 4813, taasoo ka dhigaysa wax soo saarka heerka qaran ee Huaihai Mechanic & Technology Technology Co., Ltd, taas oo calaamad u ah waaberiga ganacsiga qaybaha asaasiga ah ee shirkadda.
Iskaashiga Horumarinta Caalamiga ah ayaa la aasaasay ka hor warshadaha iyadoo istaraatijiyad The Belt iyo Road ee qaranka si loo xasiliyo shabakadda suuqa dibadda, faafinta alaabta iibka kulul adduunka oo dhan si loo dhiso aasaas wanaagsan horumarka iyo horumarinta ganacsiga kooxda`
45 milyan oo doolar ayaa lagu maalgaliyay si loo helo Hongan New Energy Auto Co., Ltd, oo kor u qaadaysa kala duwanaanshaha ganacsiga laga bilaabo gaadiidka dhaqaalaha ee loo maro gawaarida raaxada, kor u qaadista horumarka ganacsi ee shirkadu si dhakhso leh oo caafimaad qabta.
Sannadka 2018, mugga dhoofinta sannadlaha ah wuxuu kordhay 70%, wuxuu u adeegaa in ka badan 70% dadweynaha adduunka, oo kaalinta koowaad ka galay warshadaha.
2019, Huaihai Holding Group ayaa aasaasay oo hirgelisay istiraatijiyad horumarineed oo tayo sare leh, Lithiumization, Globalization. Badeecadaha la dhoofiyo waxay ku jiraan No. 1 warshadaha 3 sano oo isku xigta.Sannadka 2019, istaraatijiyad caalamiyeynta Huaihai Holding Group waxay qaadday tallaabo adag.
Sannadka 2020 waxa loo qoondeeyey inuu noqdo mid aan caadi ahayn.Faafida degdega ah ee loo yaqaan 'Covid-19' ayaa hoos u dhigaysa qulqulka badeecadaha soo dejinta iyo dhoofinta, xannibaadda wareegga silsiladda sahayda adduunka;Maalgelinta shisheeye ayaa si weyn loo saameeyay, qaabka ganacsiga caalamiga ah wuxuu ku socdaa isbeddello qoto dheer. Iyadoo la raacayo hagidda istaraatiijiyadda horumarinta kooxda iyo kooxda hoggaanka, dhammaan shaqaalaha Huaihai International waxay u wada shaqeeyeen si ay uga gudbaan dhibaatooyinka oo ay hore ugu socdaan si geesinimo leh.Ganacsiga shirkadu waxa uu gaadhay heerkii ugu sareeyey waxana uu bog qani ah ka qoray safarka horumarka dibada ee Huaihai International.